आज तपाईको भाग्य यस्तो छ : २०७७ भदौ ११ गतेको राशिफल - Sagarmatha Online News Portal
आज तपाईको भाग्य यस्तो छ : २०७७ भदौ ११ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७७ भदौ ११ गते बिहीवार । तदनुसार इ.स. २०२० अगस्ट २७ तारिख । नेपाल संवत ११४० ञलाथ्व । भाद्र शुक्लपक्ष । नवमी, १२ः२७ उप्रान्त दशमी ।
अरूका लागि समय खर्चनुपर्ला। नयाँ काममा हात हाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। परिस्थितिले चुनौती निम्त्याए पनि गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। दिनभरि संघर्ष गर्नुपरे पनि साँझतिर सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र भाग्यले अवसर जुराउनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै दाम र प्रतिष्ठा समेत कमाउने बेला छ ।
पहिलेको सफलताले हौसला प्रदान गर्नेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। अध्ययनमा राम्रो प्रगति गर्ने समय छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् र दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। तापनि आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। साँझतिर द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले व्यर्थैमा दुःख दिनेछन् ।
भौतिक साधन जुट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ होला। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। साँझदेखि पारिवारिक असमझदारीले काम रोकिन सक्छ। साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। नयाँ काममा हात हाल्न केही समय लाग्नेछ। पहिलेको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
साथीभाइसँग अलि सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। हतारको निर्णयले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। मिहिनेतले नियमित काम सम्पादन हुनेछ। उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ। साँझतिर प्रतिस्पर्धीहरूले दुःख दिन सक्छन्। विशेष योजना गोप्य राख्नुहोला। केही विवादास्पद जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि हातपार्न समय लाग्नेछ। काममा आफ्नो श्रम परे पनि प्रतिफलमाथि अरूले राज गर्नेछन्। पहिले दिएको वचनले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। आफन्त तथा साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। अरूका लागि जुट्नुपरे पनि साँझतिर विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट लाभ हुनेछ ।
आवश्यकता पूरा गर्न सरसापट लिनुपर्ने हुन सक्छ। परिस्थितिवश फजुल खर्च बढ्नेछ। लगानीको रकम रोकिनेछ। तापनि मिहिनेत गर्दा आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। आवश्यक भौतिक साधन जुट्नेछन्। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ। साँझदेखि खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। समाजमा तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। साँझदेखि आयस्रोत बढ्नेछन्। स्रोत(साधन जुट्नाले कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ ।